I-Ultrasonic Henna Extraction - I-Hielscher Ultrasound Technology
Izitshalo zeHenna zisetshenziselwa kakhulu ezithombeni, ezomsoco nemikhiqizo yezokwelapha.
I-ultrasonic extraction indlela yandisa isivuno samakhemikhali asebenzayo njengama-antioxidants, ama-phenolics, nama-colorants.
Ukucubungula nge-Ultrasonic kuyindlela elula yokungasebenzi okuqinisa ukukhiqizwa kwe-Henna.
Ukukhiqizwa kwe-ultrasonic ye-Henna Extract
Amaqabunga e-Henna (Lawsonia inermis L.) zicebile kuma-antioxidants, ama-phenolics kanye nama-agent agqamile okusetshenziselwa njengezithako eziyigugu ekukhiqizeni ukudla, i-pharma kanye ne-cosmetic.
Ukuze ukhiqize izitshalo eziphezulu ze-Henna, kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe inqubo ephansi elawulwa yesikhumba. Isizinda se-ultrasonic sisaziwa futhi sisetshenziswa kakhulu ukukhipha izithako eziphilayo ezivela ezintweni ezitshaliwe. Inqubo yesikhamo se-ultrasonic iqinisa ukuhlukaniswa kwamakhemikhali e-bioactive okuhlosiwe futhi ibangele izitshalo eziphakeme kanye namazinga okukhishwa ngokushesha. I-Sonication ingahlanganiswa kalula namanye amasu okukhipha okufana nalokhu i-hydrodistillation, I-Soxhlet (usebenzisa amakhemikhali e-polar non-polar), noma isizinda se-Clevenger. Ukulungiswa kabusha kwezinhlelo zokufakelwa ezikhona kungenziwa ngaphandle kwezinkinga kusukela ama-ultrasonicators ama-Hielscher ahlangene futhi angahlanganiswa ngokuvumelana nezimo ohlelweni lokusetha.
Ngokuphathelene nokukhiqizwa kwe-henna e-ultrasonically, umkhiqizi angakhetha kuwo i-solvents ehlukahlukene ezifana namanzi, amafutha yemifino, i-glycerine, i-methanol, i-ethanol, i-hexane, i-acetone, i-chloroform, i-propylene glycol njll Ngokuvumelana nokusetshenziswa kwayo kokugcina, i-Henna iqabunga leqabunga lingabhekwa njenge-henna-based, solvent, based alcohol, or alcohol ukukhipha (isib. i-henna ekhishwe ngamakhemikhali ayo e-anti-bacterium iphumelela kangcono njengokukhipha utshwala, kuyilapho ukhipha iziqhumane ze-henna kungcono kakhulu uma kukhishwa amafutha).
Amakhemikhali asebenzayo kanye nama-colorants aseHenna abanjwe emagqabeni asitshalo. Iqabunga lomuthi we-henna liqukethe ingxenye yombala obomvu-orange, i-lawone (i-2-hydroxy-1,4-napthoquinone), eyaziwa nangokuthi i-hennotannic acid. I-Henna ayifuni isikhumba noma ezinye izinto kuze kube yilapho ama-molecule we-lawsone ekhishwa emaqenjini weqabunga le-henna. I-ultrasound yamandla kuyindlela ephumelela kakhulu ukuphula amangqamuzana futhi ukuhlukanisa / ukukhulula izinhlanganisela eziboshwe. Lapho ukuhlanganiswa kwe-henna nama-molecule we-lawone ekhishwe kusetshenziswa isikhumba, isikhumba noma indwangu, ama-agent agqabha amafutha (isikhumba, izinwele, isikhumba, izindwangu) futhi abophe amaprotheni.
I-Henna Antioxidants namaPhenolics
Ama-antioxidants nama-phenolic compounds yizithasiselo eziyigugu zemikhiqizo yezokwelapha nezomsoco. I-Henna iqukethe ama-agents agqugquzelayo amaningi ahloswe ngenxa yokulwa nokuvuvukala kwawo, i-analgesic, i-hypotensive, i-antibacterial, i-antifungal, i-astringent, nemiphumela ye-antiviral. Ngaphandle kwe-2-hydroxynapthoquinone (imithethoone), i-mannite, i-tannic acid, i-mucilage ne-gallic acid eyaziwa njengezinye izingxenye zamakhemikhali eziyinhloko zesitshalo se-henna. I-Quantitavely, i-2-hydroxynapthoquinone itholakala njengento eyinhloko ye-bioactive substance. Ukusebenzisa izinto ze-henn ezisebenzayo, ukukhishwa kungasetshenziswa ngendlela yamadayi, ama-tinctures, noma amafutha.
Isizinda se-ultrasonic sithuthukisa isivuno se-phenolic kanye nomsebenzi we-antioxidant wokukhishwa kwe-Henna. Imigomo yemigomo elawulwa ngokuqondile ivumela ukukhulula ama-compounds esebenzayo ngaphandle kokulimaza.
Amaprosesa anamandla ase-Hielscher ase-Hielscher avumela ukulawula okugcwele phezu kwayo yonke imigomo yenqubo ebalulekile njenge-amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa nokuqina. Lokhu kuqinisekisa ukuthi izingxube ezisebenzayo zamagilebhisi (isib. UHenna, i-safari, umnqumo, ukwatapheya njll) azibhujiswa ngenxa yezimo ezinzima zokucubungula. Ukulungiswa okucacile kwemigomo yenkambiso kwenza kube lula ukuqinisa inqubo yakho yokukhipha ukuze kufeze izinga eliphakeme kanye nokukhipha okuphezulu.
I-Hielscher Ultrasonics inikeza uhla olugcwele lwe-high-power ultrasonicators – kusukela ku-compact i-lab cell ukuphazamisa kuya ku izinhlelo ze-industrial ultrasonic. Amadivaysi ethu e-ultrasonic angasetshenziselwa i-batch nokuqhubeka okugeleza-ngokusebenzisa isizinda.
Thintana nathi namhlanje ngezidingo zakho zokukhipha! Sizojabula ukukuncoma ukuthi iprosesa ye-ultrasonic efanelekayo yezidingo zakho.
I-Henna (Lawsonia inermis I-Linn) isitshalo esivamile, esiqhakazayo saziwa nangokuthi i-hina, i-Mehndi, i-henna tree, isihlahla se-mignonette, noma isi-Egyptian privet.
I-compounds ye-Henna isetshenziselwa imifino yezokwelapha futhi njengombala wemvelo. I-Lawsone iyi-pigment yemvelo etholakala emaqabunga e-henna. I-Lawsone (i-2-hydroxy-1,4-naphthoquinone), eyaziwa nangokuthi i-hennotannic acid, isetshenziswe njengombala obomvu-orange ukuze kukhishwe isikhumba, izinwele nezindwangu. Uma i-Henna isetshenziselwa ubuciko bezitho zomzimba nezitho zomzimba, isetshenziswa njenge-henna unamathela esikhumbeni. Umthetho we-agent we-coloring wakhe kufanele ukhishwe kuma-plant cells, isib. Nge-ultrasonic isizinda. Lapho umquba we-henna usetshenziswa, umbala uyadlulela engxenyeni engaphandle yesikhumba bese unikeza ibala elibomvu elibomvu.
Amaqabunga amaHenna, imbewu kanye namagxolo amafomu ajwayelekile kakhulu ukulungiselela ukukhishwa okusetshenziselwa inqubo yokwelapha. Ukuhlanganiswa okuphezulu kwamakhemikhali namakhemikhali asebenzayo eHenna asetshenziselwa ukulwa nokuvuvukala, i-analgesic, i-hypotensive, i-antibacterial, i-antifungal, i-astringent nemiphumela ye-antiviral. Ngenxa yalezi zakhiwo ezihlobene nezokwelapha nezempilo, ama-henna-derived compounds njengama-antioxidants kanye nama-phenolics asetshenziselwa ukulungiselela ukudla kanye nemikhiqizo ye-pharma (isib. Imithi yendabuko, umkhuba we-Ayurvedic).
Ngaphezu kwalokho, i-antioxidants yemvelo iyabizwa ngokuthi i-additive esebenzayo yokunciphisa ukuchithwa kwe-oxidative kokudla okufana namafutha nokudla okuqukethwe okuphezulu kwe-lipid.
I-Henna ibizwa ngokuthi idayisi kanye ne-cosmetic compound esebenzisa kabanzi njengendbala yemvelo yezinwele, isikhumba, izipikili kanye nezindwangu.